Fahasamihafana eo amin'ny Runnable sy ny Thread | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Runnable sy ny Thread | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Teknolojia / IT / Fandaharana / Fahasamihafana eo amin'ny Runnable sy ny kofehy
Fahasamihafana eo amin'ny Runnable sy ny kofehy
25 Janoary 2018 Narotsak'i Lithmee
Fahasamihafana lehibe - Runnable vs Thread
Ny programa iray amin'ny fampiharana dia fantatra amin'ny hoe dingana iray . Ny fizotrany dia azo zaraina ho zana-drafitra marobe. Ohatra, ny Microsoft Word dia dingana iray. Mandritra izany fotoana izany dia manamarina ny lesoka sy ny fitsipi-pitenenana izy. Izany dia subprocess. Ireo subprocesses ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe kofehy. Multithreading dia dingan'ny fanatanterahana kofehy maro miaraka. Ny rindran-damina dia azo aorina amin'ny alàlan'ny fiteny amin'ny fandaharana samihafa. Runnable sy Thread dia mifandray amin'ny programa Java. Misy fomba roa any Java hamoronana kofehy amin'ny alàlan'ny fampiharana ny interface Runnable na fanitarana ny kilasin'ny Thread. Rehefa mampihatra Runnable, kofehy maro no afaka mizara ilay zavatra misy kofehy mitovy raha mbola ao am-pianarana Extending Thread, ny kofehy tsirairay avy dia manana zavatra miavaka mifandraika amin'izany. Izany no maha samy hafa ny Runnable sy ny Thread.
2. Inona no atao hoe Runnable
3. Inona no atao hoe Thread
4. Ny fitoviana eo amin'ny Runnable sy ny Thread
5. Fampitahana mifanila amin'ny lafiny iray - Runnable vs Thread in Tabular Form
Inona no atao hoe Runnable?
Misy kofehy mandalo fanjakana sasany. Ny "vaovao" dia fiandohan'ny fihodinan'ny kofehy. Aorian'ny fiantsoana ny () fomba fiasa dia mila filaharana vaovao. Raha misafidy ny kofehy ny mpandahatra ny kofehy dia mifindra any amin'ny fanjakana mandeha izy. Miandry ny fanjakana ny kofehy raha toa ka miandry kofehy hafa ny thread iray hanatanterahana asa iray. Aorian'ny famitan'ny kofehy ny asany dia mankany amin'ny fanjakana famaranana izy io.
Ny kofehy dia azo ampiharina amin'ny fampiasana ny interface Runnable. Jereo ilay programa etsy ambany.
Sary 01: programa Java hamoronana kofehy amin'ny fampiasana Runnable interface
Araka ny fandaharana etsy ambony, ny Runnable Demo kilasy dia mampihatra ilay interface Runnable. Ny fomba fihazakazahana () dia ao anatin'ny kilasy izay mampiditra Runnable interface. Io no teboka fidirana ho an'ny kofehy. Ny lojika dia amin'ny fomba mihazakazaka (). Ao amin'ny programa lehibe, ny kofehy dia noforonina tamin'ny famaritana zavatra iray namboarina avy amin'ny Runnable Demo class. T1 izany. Ny fomba fanombohana () dia antsoina hoe fampiasana t1.
Jereo ilay programa etsy ambany.
Sary 02: programa Java hamoronana kofehy hanatanterahana loop, amin'ny alàlan'ny fampiharana ny interface Runnable
Araka ny ohatra etsy ambony, ny sokajy Runnable Demo dia mampihatra ny interface Runnable. Ny lojika hanatanterahana ny kofehy dia voasoratra amin'ny fomba mihazakazaka (). Ao amin'ny programa lehibe, ny kofehy dia noforonina tamin'ny famaritana zavatra iray namboarina avy amin'ny Runnable Demo class. T1 izany. Avy eo, ny fomba fanombohana () dia antsoina hoe fampiasana t1.
Inona no atao hoe kofehy?
Ny fomba hafa amin'ny famoronana kofehy dia amin'ny fanitarana ny kilasin'ny Thread. Misy dingana telo izy io. Voalohany dia ny manambara ny kilasy ho toy ny fanitarana ny kilasin'ny Thread. Aorian'izay dia tokony hosoratana ny fomba fihazakazahana (). Izy io dia manana ny filaharan'ny dingana tokony hataon'ny kofehy. Ary farany, noforonina ilay zavatra misy kofehy, ary nantsoina ny fomba fanombohana () hanombohana ny fanatanterahana ny kofehy. Jereo ilay programa etsy ambany.
Sary 03: programa Java izay manitatra ny kilasin'ny Thread
Araka ny fandaharana etsy ambony, ny kilasy MyThread dia manitatra ny kilasin'ny Thread. Manilika ny fomba fihazakazahana izy io. Ny fomba fihazakazahana () dia misy ny lojika hovonoin'ny kofehy. Io no teboka fidirana amin'ny kofehy. Avy eo dia noforonina ilay zavatra kofehy. Izy io dia thread1. Ny kofehy dia manomboka mampiasa ny fomba fanombohana (). Hanatanteraka fomba fiantsoana mihazakazaka () izy io.
Ohatra iray fandaharana amin'ny kilasy roa manitatra ny kilasin'ny Thread dia toy izao.
Sary 04: programa Java misy kilasy roa manitatra ny kilasin'ny Thread
Araka ny fandaharana etsy ambony, ny kilasy A sy B dia manitatra ny kilasin'ny Thread. Ireo kilasy roa ireo dia samy manana ny fampiharana ny fomba fihazakazahana (). Ny kofehy lehibe dia izay manatanteraka ny fomba lehibe (). Alohan'ny hahafatesan'ny kofehy lehibe dia mamorona izy ary manomboka ny thread1 sy ny thread2. Amin'ny fotoana nahatratraran'ny kofehy lehibe ny faran'ny fomba lehibe, dia misy kofehy telo mihodina. Tsy misy filaharana manokana ahazoan'ny kofehy vokatra. Raha vantany vao manomboka ny kofehy dia sarotra ny manapa-kevitra ny amin'ny didy izay hataon'izy ireo. Mihazakazaka tsy miankina izy ireo.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny Runnable sy ny Thread?
Samy mampiasa ny famoronana kofehy any Java.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Runnable sy ny kofehy?
Runnable dia mpizara ao Java hamoronana kofehy ahafahan'ny kofehy maro mizara ilay zavatra misy kofehy mitovy. Ny kofehy dia kilasy iray any Java hamoronana kofehy izay ahitan'ny kofehy tsirairay zavatra miavaka mifamatotra aminy.
Ao amin'ny Runnable, kofehy maro no mizara zavatra mitovy, koa mila kely kokoa ny fitadidiana. Ao amin'ny kilasin'ny Thread, ny kofehy tsirairay avy dia mamorona zavatra tsy manam-paharoa, noho izany dia mila fitadidy bebe kokoa.
Aorian'ny fampiharana ny interface Runnable dia afaka manitatra kilasy iray izy io. Ny lova marobe dia tsy tohanana ao Java. Aorian'ny fanitarana ny kilasin'ny Thread dia tsy afaka manitatra kilasy hafa izy ity.
Ny interface Runnable dia mahatonga ny kaody hitazomana bebe kokoa. Ao amin'ny kilasin'ny Thread dia mandany fotoana ny fikojakojana.
Famintinana - Runnable vs Thread
Ny dingana iray dia mizara zana-dingana maromaro hanatanterahana asa marobe amin'ny fotoana iray. Ireo subprocesses ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe kofehy. Ny fametrahana ny kofehy dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampiharana ny interface Runnable na amin'ny fanitarana ny Thread Class. Mora ny manitatra ny kilasin'ny Thread, saingy tsy fanao Programming-oriented Programming tsara kokoa izany. Rehefa mampihatra Runnable dia maro ny kofehy afaka mizara ilay zavatra misy kofehy mitovy raha mbola manitatra ny kilasin'ny Thread ny kofehy tsirairay avy dia manana zavatra miavaka mifandraika amin'izany. Izany no mahasamihafa ny Runnable sy ny Thread. Ao amin'ny kilasy Thread kilasy famoronana zavatra marobe dia afaka mandany fahatsiarovana bebe kokoa.
Sintomy ny PDF an'ny Runnable vs Thread
Azonao atao ny misintona ny kinova PDF an'ity lahatsoratra ity ary ampiasao izany ho an'ny tanjona ivelan'ny Internet toy ny isaky ny naoty. Azafady mba ampidino eto ny kinova PDF eto Fahasamihafana eo amin'ny Runnable sy ny kofehy
1.utorialspoint.com. “Java Multithreading.” The Point , Azo zahana eto
2.Pramodbablad. "Manitatra ny Thread Vs dia mampihatra ny runnable any Java." Java Concept Of The Day, 11 Novambra 2016. Azo jerena eto
3.Ny fomba famoronana kofehy ao amin'ny Multithreading Java | Core Java Tutorial | Studytonight. Hita eto
Fahasamihafana eo amin'ny dingana sy ny kofehy Fahasamihafana eo amin'ny Semaphore sy Mutex Fahasamihafana eo amin'ny filaharana sy ny lisitra mifandray Fahasamihafana eo amin'ny fitsapana mahazatra sy ny fanandramana mifototra amin'ny zavatra Fahasamihafana eo amin'ny JAR sy ny ADY
Filed Under: Programming Tagged With: Mampifanaraka Runnable sy Thread , Runnable , Runnable ary kofehy fahasamihafana , Runnable sy Thread fitoviana , Runnable Code , Runnable Definition , Runnable Memory , Runnable Procedure , Runnable vs Thread , thread , Thread Code , thread definition , Thread Memory , Fomba fanao kofehy
Fahasamihafana eo amin'ny kibo sy ny vavony
Fahasamihafana eo amin'ny teoria autogenous sy ny teoria endosymbiotic
Fahasamihafana eo amin'ny sela misy solika sy batterie
Fahasamihafana eo amin'ny androm-piainana sy ny androm-piainana
Fahasamihafana eo amin'ny lobià sy ny mpisolo vava